Fotodrafitrasa mety amin’ny rehetra no tokony haorina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rasolonjatovo Willy il y a 17 jours
Fanentanana faha 13 amin’ny fanentanana 14 ataon’ny tetikasa Veni na vovonana ekentsika iaina mendrika sy salama ity natao teny Ambohidratrimo ity. Ny hetsika natao hatramin’izay dia nangatahana engagement na faneken’ny mponina hiova fihetsika. Io faneken’ny mponina io dia nentanina mihitsy hoe manomboka izao izahay, rehefa avy nahita ilay fanentanana dia : « tsy hanilikilika intsony ny olona manana fahasembanana ary handamina ny fotodrafitrasa hisy ao an-tranonay, ary ny kaominina nasaina nandamina ny fotodrafitrasa misy eny amin’ny sekoly sy eny amin’ny tobim-pahasalamana mba hanaiky sy hanaja ny toe-batan’ireo olona manana fahasembanana.» Mila jerena mihitsy ny tetibolam-panjakana. Tokony ho tafiditra amin’ny tetibolam-panjakana ny fanatanterahana izany. Manahirana ireo olona manana fahasembanana tokoa ny fampiasana ny trano fivoahana fampiasan’ny olona tsy manana fahasembanana. Raha ny kabone 101 ohatra dia mety ho latsaka anaty lavaka ireo manana fahasembanana amin’ny fahitana. Tahaka izany koa ireo vehivavy bevohoka indrindra fa efa somary lehibe ny kibony. Mila asiana fitazonana ihany koa hifikiran’izy ireo. Rehefa nanao fanandramana ireo mpijery ny fanentanana dia nahatsapa fa tsy mety ho an’ireo olona manana fahasembanana tokoa ny kabone 101, indrindra ihany koa ny vehivavy mitondra vohoka tsy afaka milatsaka ambany be amin’ny kabone 101 fa ny kabone anglisy no mety aminy, fa mbola asiana fitazomana. Raha ny filazan’ny mpikarakara dia fotodrafitrasa tsy manavaka no tokony hatao mba tsy hifanilika sy hifanavaka. Zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny olombelona ny fivalanana sy fivalanan-drano, tafiditra amin’ny filana fototra ka tokony horaisina ho zava-dehibe ny fanatotosana azy.
Raha ny filazan’ny mpikarakara avy ao amin’ny WaterAid dia resy lahatra ireo mponina sy mpitondra any amin’ny Kaominina nanaovana fanentanana ny amin’ny maha zava-dehibe ny fanaovana fotodrafitrasa mendrika ny rehetra, na fidiovana izany na fivoahana. Inoana ny fampidiran’izy ireo any amin’ny drafi-pampandrosoan’ny kaominina mba hanomezana ity zo fototra ity ahafahan’ny mponina hiaina ampilaminana, indrindra fa ireo olona manana fahasembanana na ny vehivavy bevohoka ihany koa.